Maxay Yihiin Shanta Tartan Ee Horyaala Lionel Messi Kadib In Uu 32-Sano Jir Noqday? Akhriso Shanta Qodob Iyo Haddii Gaadhi Karo. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 24, 2019 at 18:55 Maxay Yihiin Shanta Tartan Ee Horyaala Lionel Messi Kadib In Uu 32-Sano Jir Noqday? Akhriso Shanta Qodob Iyo Haddii Gaadhi Karo.2019-06-24T18:55:44+01:00 CAYAARAHA
Kabtanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa maanta u dabaal degay sanad guuradii 32 aad ee ka soo wareegtay dhalashadiisa wuxuuna talaabo hore ugu qaaday qaybtii ugu danbaysay ee waayihiisa ciyaareed.
Marka ay ciyaartoydu gaadhaan 32 sano waxaa la fishaa in uu bilawdo hoos u dhac ama xataa in uu joojiyo horumarkii uu soo samaynayay maadaama oo uu jid haaan gaadhay heerkii ugu saraysay ee waqtiga ay ciyaartoyodu xaalada ugu fiican ku jiraan.
Lionel Messi waxa uu soo qaato waayo ciyaareed oo layaableh laakiin taasi lama micno aha in aanu wali lahayn hami wayn oo kubbada cagta ah waxaana jira qodobo ilaa shan arimood ah.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shanta arimood ee uu Lionel Messi isha ku hayo in uu gaadho ka hor waayihiisa ciyaareed inta aanu soo afmeer halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
5-In Uu Markale Ku Guulaysto koobka Champions League
Lionel Messi waxa uu koobka kooxaha Yurub ee Champions league uu ku soo guulaystay afar jeer laakiin waxa uu shantii sanadood ee ugu danbeeyay ku soo dhibtoonayay in uu Barcelona markii shanaad kula guulaysto koobkan.
Balan qaadkii bilawgii xili ciyaareedkii la soo dhaafay ee Lionel Messi ayaa qalbi jabkii ugu xumaa ku dhamaaday markii ay Barcelona oo guul 3-0 ah afar dhamaadkii UCL ka sii gaadhay Liverpool ay guuldaro taariikhi ahayd oo 4-0 ah kala kulantay Reds kulankii Anfield.
Riyadii Barcelona iyo Lionel Messi ayaa sida ugu xun ku burburtay waana hamigiisa ugu wayn ee Barcelona in uu koobka Champions league markale ku guulaysto.
Markii ugu danbaysay ee uu Lionel Messi sare u qaaday koobka Champions league waxay ahayd sanadkii 2015 kii wuxuuna hamigiisu yahay in uu markale ugu yaraan ku guulaysto koobkan inta aanu waayihiisa ciyaareed soo dhamaysan.
4-In Uu La Wareego rekoodhka Gool Dhalinta Abid Ee Champions leauge
Cristiano Ronaldo ayaa wali ah xidiga abid goolasha ugu badan ka soo dhaliyay Champions leauge wuxuuna ku haystaa 126 gool laakiin Lionel Messi oo kaalinta labaad ku jira ayaa haysta 112 gool.
Iyada oo la ogyahay in Lionel Messi uu laba sanadood ka da’yar yahay Cristiano Ronaldo isla markaana ay suurtogal tahay in uu garoomada kubbada cagta kaga danbayn doono ama xataa uu ka sii firfircoonaan karo haddii ay waqti dheer sii ciyaaraan, waxa uu doonayaa in uu rekoodhkan la wareego.
Aragti ahaan wali Lionel Messi waxa uu ku dhaw yahay in uu rekoodhkan la wareegi karo isaga oo xili ciyaareedkii dhamaaday ahaa xidiga gool dhalinta ugu badan ka soo sameeyay UCL.
Sidaa daraadeed, tartamad xidigan 32 sano jirka noqday horyaala waxaa ka mid ah in uu la wareegi karo rekoodhka gool dhalinta abid ee Champions league.
Riix 2,3 si aad qodobada oo dhan u akhrisato
« EXPLAINER-Ethiopia’s ethnic militias in the spotlight after failed coup
SAWIRO: Waxaan Ku Raaxaysanaa Fasax U Dhigma Saddexdii Koob- Raheem Sterling Iyo Goobta Uu Fasixiisa Ku Qaadanayo. »